Wiil Somali Ah Oo Weerar Ka Fuliyay Dalka Mareykanka. – Bogga Calamada.com
Wiil Somali Ah Oo Weerar Ka Fuliyay Dalka Mareykanka.
November 29, 2016 5:36 am Views: 14
Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka waxay sheegayaan in ruux hubeysan uu weerar ka fuliyay hoolka jaamacadda Ohio waxaana halkaasi ku dhaawacmay 8 ruux.
Taliyaha Booliska gobolka Ohio ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ay toogasho ku dileen ruuxii weerarka geystay, warbaahinta maxalliga ah waxay baahisay in dadka dhaawacmay qaarkood xaaladood caafimaad ay aad u liidato.
Cabsi iyo walbahaar ayaa soo wajahay ardayda iyo macalimiinta jaamacadda Ohio xilligii uu weerarku socday, boqolaal katirsan ciidamada Ammaanka Nasaarada Mareykanka ayaa lagu daad gureeyay goobta weerarku ka dhacay.
Toogashadan ayaa imaanaya xilli taageerayaasha Madaxweynaha Mareykanka ay masaajiddaÂ Muslimiinta Gobolka Kalifoorniya ku dhajiyeen warqad cunsuriyad iyo naceyb u muujinayay dadka Muslimiinta ah.
Wiilka Somalida ee weerarka Jaamacada Ohayo fuliyay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Rizaaq Cartan kaasi oo labo bil ka hor wareysi uu siiyay wargeyska jaamacada waxa uu sheegay inuu si aad ah uga cabanayo dhibaatada xoogan ee Nasaarada Mareykanka gaar ahaan booliska ay ku hayaan dadka Muslimiinta ee ku dhaqan dalkaasi.